PVC na-akpaghị aka ntanetịaka Roller shutter door China Manufacturer
Nkọwa:Nwepu ihe nkedo akpaaka,Ụlọ ntanetị na ntanetị,PVC Akpaaka Ntughari Okporo ụzọ
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > PVC High Speed ​​Door > PVC na-akpaghị aka ntanetịaka Roller shutter door
Ihe Nlereanya.: HR-001
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ ụzọ nkedo Roller, jide n'aka na ị ga-enweta ya n'aka ndị ọkachamara. Ọ bụghị nanị na anyị na-arụpụta ma na-etinye mgbidi na-ekpuchi ụzọ na ákwà ngebichi, ma anyị na-eme ya niile ọnụ. Ndị anyị na-ahụ maka ụlọ anyị nwere ike iwepụta nkọwa gị, eserese ma ọ bụ echiche gị ma gbanwee ha n'ime ọnụ ụzọ mgbochi ọnụ nke ga-eme ka ihe ọ bụla achọrọ gị. Ka mma, ụlọ ọrụ buru ibu anyị pụtara na anyị nwere ike ịmepụta ọnụ ụzọ nkedo na-enweghị atụ karịa ogo ndị ọkachamara. Naanị ị ga-agwa anyị ihe ndị ị chọrọ, anyị na-agwa gị maka gị.
Shenzhen Hongfa Automatic Co, .Ltd bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke na-etinye aka na mmepe nke ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ na-emepe nke ụwa . Ihe ndị anyị na-emepụta gụnyere ọnụ ụzọ na-agbanwe ngwa ngwa, ụlọ ọrụ mmepụta ụlọ ọrụ, ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, PVC
Nwepu ihe nkedo akpaaka Ụlọ ntanetị na ntanetị PVC Akpaaka Ntughari Okporo ụzọ Ntinye ihe nkedo akwa Mpempe ihe na-emepe windo akpaaka Onu oghere akpaaka Onu oghere na-emepe akpaaka Oghere Galvanized akpaaka